Pot सम्भावित सोया लेसिथिन पाउडर लाभ - शाke्के केमिकल
8 सम्भावित सोया लेसिथिन पाउडर लाभ
सोया लेसिथिन पूरकको लोकप्रियता विश्वभरि बुशफायर जस्तो फैलिएको छ, बढ्दो सोया लेसिथिन थोक बिक्रीमा कुनै आश्चर्य छैन। लेसिथिन एक सामान्य शब्द हो जुन विभिन्न फ्याट्टी यौगिकहरूको सन्दर्भ हो जुन प्राकृतिक रूपमा बिरूवामा र जनावरको ऊतकहरूमा पाइन्छ। खाना बनावट सुधार गर्नका साथै, लेसिथिन पनि खाना पकाउने तेल र सलाद ड्रेसिंग जस्ता विभिन्न खाद्य उत्पादनहरूको शेल्फ लाइफ बढाउने क्षमताको लागि परिचित छ।
सुरुमा, लेसिथिन अण्डा यर्कबाट लिइएको हो, तर समयको साथ, कपास, बीउ, समुद्री खाना, सोयाबीन, मिर्गौला, काली गेडाहरू, दूध, सूर्यमुखी र मकै लगायत अन्य प्रमुख स्रोतहरू पहिचान गरिएको छ। यी मध्ये, सोयाबीन सबैभन्दा धनी लेसिथिन स्रोतहरू हुन्, र यसले हामीलाई सोया लेसिथिनमा ल्याउँछ।
सोया लेसिथिन के हो?
सोया लेसिथिन लेसिथिनको एक रूप हो जुन कच्चा सोयाबीनबाट निकालिएको छ र हेक्सेन जस्ता रासायनिक विलायकको प्रयोग गरेर। त्यसो भए, तेल निकाल्ने प्रक्रियालाई अन्य उप-उत्पादनहरूबाट लेसिथिन निकाल्न प्रशोधन गरिन्छ र त्यस पछि लेसिथिन सुकाउने ठाउँ लिन्छ। यो हाल बजारमा सबैभन्दा सामान्य खाना additives को बीच हो।
सोया लेसिथिन पाउडर परम्परागत र स्वास्थ्य खाद्य भण्डारहरूमा उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य बढाउनको लागि खाद्य उत्पाद घटकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सोया लेसिथिन पाउडरबाट बनेर पूरकहरूले कोलेस्ट्रॉल घटाउने सहित स्वास्थ्य लाभहरूको विस्तृत सरह प्रस्ताव गर्दछ। यो तिनीहरूको उच्च फास्फेटिडेल्कोलीन र फास्फेटिडेल्सेरिन सामग्रीको कारणले हो। यी दुई फास्फोलिपिडहरू मानव शरीरको लिपिड रिप्लेसमेन्ट थेरापीको काममा आउँदछन्।
8 सम्भावित सोया लेसिथिन लाभ
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, सोया लेसिथिनका धेरै फाइदाहरू छन्, ती प्रमुखहरू हुन्:
मानव शरीरमा कोलेस्ट्रॉलको एक उच्च मात्राले धेरै स्वास्थ्य जोखिमहरू आकर्षित गर्दछ, सबैभन्दा गम्भीर एउटा हो हृदयघातको जोखिम बढेको। भाग्यवस, सोया लेसिथिन पोषणको साथ काम गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि सोया लेसिथिन पाउडर वा सोया लेसिथिन क्याप्सुलले कलेजोलाई उच्च मात्राको उच्च घनत्वको लाइपोप्रोटिन (एचडीएल) उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ, जसलाई "राम्रो" कोलेस्ट्रोल पनि भनिन्छ।
जब एचडीएलको स्तर बढ्छ, खराब कोलेस्ट्रॉल (कम घनत्वको लाइपोप्रोटिन) स्तर कम हुन्छ। त्यहाँ अन्य उपायहरू छन् जुन व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्न सक्छ, तर सोया लेसिथिन क्याप्सूल, सोया लेसिथिन दूध वा सोया लेसिथिन पाउडर सहितको खाना लिने सबैभन्दा प्रभावकारी प्राकृतिक उपचारहरू मध्ये एक हो।
हाइपरकोलेस्ट्रोलिया (रगतमा उच्च कोलेस्ट्रोलको स्तर) बाट पीडित व्यक्तिहरूमा सोया लेसिथिन पोषणको प्रभावको मूल्या to्कन गर्न एउटा अध्ययन गरिएको थियो। शोधकर्ताहरूले भने कि दैनिक सोया लेसिथिन पूरक सेवन (प्रति दिन १ 17 मिलीग्राम) हाइपरकोलेस्ट्रोलियामा total१ कुल कोलेस्ट्रॉल घटाउनु हो। एक महिना पछि
उही समयमा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉलको स्तर %२% र दुई महिना पछि percent 42 प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यसले सुझाव दिन्छ कि नियमित सोया लेसिथिन पूरक सेवन हाइपरकोलेस्ट्रोलियाको लागी एक प्रभावकारी उपचार हुन सक्छ।
२.Soy लेसिथिन र स्तन क्यान्सर रोकथाम
२०११ एपिडेमिलोजी जर्नलको अध्ययन अनुसार सोया लेसिथिन र स्तन क्यान्सर रोकथाम सम्भावनामा केन्द्रित, लेसिथिन पूरक प्रयोगले स्तन क्यान्सर जोखिम कम गर्न श्रेय दिन सक्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले परीक्षण अवधि भित्र सोया लेसिथिन सप्लीमेन्ट सेवन गर्ने पोस्टमेनोपौसल महिलाहरू बीचमा स्तन क्यान्सर हुने घटनाहरू उल्लेख गरे।
यो क्यान्सर घटाउने सम्भावना हुन सक्छ भन्ने शंका गरिएको छ किनकि सोया लेसिथिनमा फास्फेटिडेक्लोइन हुन्छ। पाचन पछि, फास्फेटिडेल्कोलीन कोलाइनमा परिवर्तन हुन्छ जुन क्यान्सर जोखिम कम गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यद्यपि, सोया लेसिथिन र स्तन क्यान्सर अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन सो पत्ता लगाउन को लागी आवश्यक छ, सोया लेसिथिन स्तन क्यान्सर को लागी एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हुन सक्छ।
U.उल्सेटरेटिव कोलाइटिस राहत
अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक भड्काउने आंत्र रोग को लागी क्रोनिक पाचन ट्र्याक पाचन अल्सरले एक सूजन को लक्षण, यसको शिकारहरूलाई धेरै पीडा दिन्छ। भाग्यवस, सोया लेसिथिन पोषण ग्रहण गर्नेहरूले यस रोगका लक्षणहरूको महत्वपूर्ण राहत अनुभव गर्दछन्।
जब सोया लेसिथिन पूरक बृहदान्त्रमा पुग्छ, यसले पचाउँछ र आन्द्राको अस्तरमा बाधा उत्पन्न गर्दछ र यसको श्लेष्म सुधार गर्दछ। बाधाले कोलनलाई ब्याक्टेरिया संक्रमणबाट बचाउँछ र राम्रो पाचन प्रक्रियामा योगदान गर्दछ।
अझ राम्रो छ, अनुसन्धानले सोया लेसिथिन पाउडरमा रहेको फास्फेटिडाइक्लोइन सामग्रीले अल्सररेटिभ कोलाइटिससँग सम्बन्धित सूजन कम गर्न सक्छ भनेर देखाउँदछ। यो रोगले नष्ट गरेको बलगम बाधा पुनर्स्थापनाको अतिरिक्त हो।
B. उत्तम शारीरिक र मानसिक तनाव ह्यान्डलिंग
सोया लेसिथिनमा फास्फेटिडेल्सेराइन हुन्छ, एक महत्वपूर्ण फस्फोलाइपिड जुन तनाव हर्मोनहरूलाई प्रभाव पार्दछ। विशेष गरी, अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुमान छ कि फास्फेटिडिलसेराइन जटिलले मानव शरीरमा चुनिंदा तनावलाई नराम्रो पार्ने प्रभाव प्रदान गर्न फस्फेटिडिक एसिड (सोया लेसिथिनमा उपस्थित) सँग काम गर्दछ। नतिजाको रूपमा, एउटा अध्ययनले सुझाव दिन्छ कि सोया लेसिथिन तनाव सम्बन्धित स्वास्थ्य अवस्थाको लागि प्राकृतिक उपचार हुन सक्छ।
थप रूपमा, २०११ मा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष र अमेरिकी जर्नल अफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनमा चित्रितले उच्च भएका व्यक्तिहरूलाई सुझाव दिन्छ कोलोन सेवन (नियमित सोया लेसिथिन उपभोक्ताहरू सहित) ले कम शारीरिक र मानसिक तनाव स्तरको अनुभव गर्‍यो। त्यस्तै रूपमा उनीहरूसँग राम्रा स्मृति प्रदर्शन र डिमेन्शिया प्रभावहरू कम छन्।
सिफारिसको रूपमा लिईएपछि, सोया लेसिथिन क्याप्सुले तपाईंको छालाको रंग सुधार गर्न सक्दछ। यो एक्जिमा र एक्ने को लागी एक प्राकृतिक प्राकृतिक उपचार हो, यसको हाइड्रेशन सम्पत्ती को लागी धन्यवाद। अचम्म मान्नुपर्दैन सोया लेसिथिन स्किनकेयर उत्पादनहरूमा एक मुख्य घटक हो।
6. सुधारिएको प्रतिरक्षा
सोया लेसिथिनको प्रभाव मूल्यांकन गर्न जनावरहरूमा गरिएको अध्ययनले देखायो कि यसले प्रतिरक्षा कार्यलाई बढावा दिन सक्छ। दैनिक सोया लेसिथिन पूरक सेतो रक्त कोशिकालाई रक्तप्रवाहमा रोगजनकहरूको बिरूद्ध लड्न मद्दत गर्नुहोस्।
D. डिमेन्शिया लक्षणहरू राहत
उच्च कोलोन सामग्रीको कारण, सोया लेसिथिनले मानव मस्तिष्क र शरीरका अन्य अंगहरूबीच राम्रो सञ्चारको लागि योगदान गर्दछ। यो किनभने कोलोन संचार मा एक प्रमुख एजेन्ट हो। त्यस्तै रूपमा, डिमेंशियाबाट पीडित व्यक्तिहरूले सोया लेसिथिनबाट ठूलो फाइदा लिन सक्दछन् यदि तिनीहरूले यसलाई आफ्नो दैनिक खाना योजनामा ​​एकीकृत गरे भने।
En.मेनोपोज लक्षण राहत
धेरै अध्ययनहरूले देखाए कि सोया लेसिथिन पूरक सेवनले महत्वपूर्ण रजोनिवृत्ति लक्षण राहत प्रदान गर्न सक्दछ। विशेष रूपमा, यो जोस बढावा दिन, धमनी कठोरता सुधार र रजोनिवृत्ति महिलाहरु मा सामान्य रक्तचाप को स्तर लाई ल्याउन पाईन्छ।
२०१ 2018 मा गरिएको एउटा अध्ययनमा 96० देखि between० वर्षबीचका 40 women जना महिलालाई अनुसन्धानको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो भने सोया लेसिथिन सप्लीमेन्ट रजोनिवृत्ति भएका महिलाहरूमा थकानका लक्षणहरू सुधार गर्न सक्षम छन् भने। केहीलाई सोया लेसिथिन पूरक व्यवस्था र बाँकी प्लेसबोमा राखिएको थियो।
परीक्षण अवधि पछि, अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि जो महिलाहरू सोया लेसिथिन सप्लीमेन्ट कोर्समा थिए उनीहरूको प्लेसबो समूहको तुलनामा धमनी कठोरता र डायस्टोलिक रक्तचाप राम्रो छ। साथै, अघिल्लो अनुभवी थकान लक्षण राहत, तर प्लेसबो समूहको साथ त्यस्तो थिएन।
लेसिथिनले कसरी काम गर्छ?
केवल अन्य फास्फोलिपिडहरू जस्तै, लेसिथिन अणुहरू पानी तर तेलमा विघटन गर्दछन्। जे होस्, यदि तेल तेलसँग मिसाइएको छ भने, अणु पनि मिश्रणमा विघटन हुन्छ। वास्तवमा, तिनीहरू सामान्यतया पानी र तेल सहितको मिश्रणमा फेला पर्दछ, विशेष गरी जहाँ पानीको अणुहरू तेल अणुसँग मिल्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरूमा, उनीहरूको फ्याट एसिडको तेल र फस्फेट समूहहरूको पानीमा सम्पर्क हुन्छ।
फलस्वरूप, लेसिथिन इमुल्सिफाइले तेलको थोपा वरिपरि साना सुरक्षात्मक ढालहरू बनाउन सक्दछ, जसले गर्दा पानीमा तेल तेल मिसाइन्छ। पानीमा आकर्षण गर्ने फोस्फेट समूहहरूले तेलको थोपालाई, सामान्य अवस्थामा कहिले पनि पानीमा उपस्थित हुँदैनन्, लामो अवधिसम्म पानीमा रहन दिन्छ। यसले किन मेयोनेज र सलाद ड्रेसिंगहरू फरक तेल र पानीको भागहरूमा अलग हुँदैन भनेर वर्णन गर्दछ।
सोया लेसिथिन साइड इफेक्ट र जोखिम
सोया लेसिथिनको सेवनले केही हल्का सोया लेसिथिन साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। सामान्य सोया लेसिथिन साइड इफेक्टहरू:
के यसले सोया एलर्जी निम्त्याउँछ?
यदि तपाइँको शरीर सोयाबीनमा अत्यधिक प्रतिक्रियाशील छ भने, तपाइँ सोया लेसिथिन इन्जेजिंगमा सोया एलर्जी विकास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, तपाईले सोयाबीन एलर्जी अनुभव गर्नु भएको खण्डमा तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु पर्छ सोया लेसिथिन दुध लिन सुरु गर्नु अघि सोया लेसिथिनले कुनै पनि अन्य खाद्य पदार्थ समावेश गर्ने पूरक सोया लेसिथिन.
त्यसोभए, सोया एलर्जी पनि सम्भावित सोया लेसिथिन साइड इफेक्टहरू मध्ये एक हो। यद्यपि यो दुर्लभ अवसरहरूमा मात्र हुन्छ।
तपाइँको शरीरमा सोया लेसिथिन र एस्ट्रोजेन स्तर बीच कुनै लिंक हुन सक्छ?
सोया लेसिथिन र मानव शरीरमा इस्ट्रोजेन स्तर बीचको सम्बन्धको बारे विवादास्पद चिन्ता भएको छ। केही मानिसहरू दावी गर्छन् कि सोया लेसिथिनको खपतले थाइरोइड र एन्डोक्राइन हर्मोनको सामान्य उत्पादनमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। तर्कसंगत रूपमा, यो अवरोधले मासिक पालना सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
यद्यपि वास्तविक स्थिति यो हो कि त्यहाँ कुनै वैज्ञानिक प्रमाणहरू छैनन् जुन मानव शरीरले "प्लान्ट इस्ट्रोजेन" लाई यसको आफ्नै रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ। लेसिथिन एस्ट्रोजेनले मात्र व्यक्तिको एस्ट्रोजेनिक गतिविधिलाई असर गर्न सक्दछ यदि यो पशु स्रोतबाट आउँदछ। थोर्न रिसर्च द्वारा गरिएको एक अध्ययनले यस स्थितिलाई समर्थन गर्दछ। अनुसन्धानको निष्कर्षले देखाउँदछ कि सोया र सोया उप-उत्पादहरूले मानवमा एस्ट्रोजेनिक मुद्दाहरूको कारण गर्दैनन्।
त्यसकारण, मानव शरीरमा सोया लेसिथिन र ईस्ट्रोजेन स्तर बीच कुनै सम्बन्ध छैन।
कसरी सोया लेसिथिन पूरक लिने?
सोया लेसिथिन पूरकहरू सोया लेसिथिन क्याप्सूल, सोया लेसिथिन गोली, सोया लेसिथिन पेस्ट, सोया लेसिथिन तरल र सोया लेसिथिन ग्रेन्युलहरू सहित बिभिन्न प्रकारहरूमा उपलब्ध छन्।
सहि सोया लेसिथिन खुराक एक व्यक्ति देखि अर्को व्यक्ति सापेक्ष छ। यो किनभने यो विभिन्न कारकहरुमा निर्भर गर्दछ जस्तै सामान्य स्वास्थ्य अवस्था र उपभोक्ताको उमेर।
यो ध्यान दिन लायक छ कि त्यहाँ पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणहरु लेसिथिनको सटीक खुराक देखाउँदै जुन कुनै विशेष परिदृश्यको लागि सुरक्षित छ। जहाँसम्म, प्राय जसो केसहरूमा, डोज 500००mg देखि २,००० mg को बीचको हुन्छ, तर तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनु महत्वपूर्ण छ तपाईको लागि उत्तम डोज निश्चित गर्नका लागि।
जबकि यो आवश्यक छैन, यो सुझाव हो कि तपाईं सोया लेसिथिनको पूरक खाना खानुहुन्छ।
सोया लेसिथिन पाउडर प्रयोग गर्दछ
सोया लेसिथिन पाउडर सहित विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ:
नकल: खाना र सौन्दर्य प्रसाधन उत्पादकहरूले सोया लेसिथिन पाउडर किन्नको लागि सोया लेसिथिन पाउडरलाई इमुल्सिफायर वा कन्जेलि agent एजेन्टको रूपमा उनीहरूको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग गर्छन्।
प्रसाधन सामग्री र खाद्य संरक्षण: जब खाना उत्पादनहरू जस्तै चकलेट, ग्रेभी, नट बटर, बेक्ड खाना र सलाद ड्रेसिंग वा कस्मेटिक उत्पादनहरू (श्रृंगार, शैम्पू, छाला कन्डिशनर, शरीर धुने वा ओठको बाम) मा एकीकृत हुँदा सोया लेसिथिन पाउडर हल्का संरक्षणको रूपमा काम गर्दछ, उनीहरूको शेल्फ लाइफ विस्तार गर्दछ। ।
केहि व्यक्तिहरू सोया लेसिथिनलाई लेसिथिन प्रयोग गर्न खरीद गर्छन् उनीहरूको घर बनाएको कस्मेटिक र खाद्य उत्पादहरूको संरक्षणको रूपमा।
Choline पूरक: धेरै व्यक्तिहरू सोया लेसिथिन खरीद गर्छन् किनभने तिनीहरूलाई थाहा छ कि सोया लेसिथिन पाउडर एक धनी choline स्रोत हो। तपाईं तपाईंको स्मूदी, जुस, दही, दाना, दलिया वा कुनै अन्य खाना वा तपाईंको मनपर्दो खाने पेयमा दिनको दुई वा दुई चम्चा पाउडर छिचोल्न सक्नुहुन्छ।
यो पूरक स्वास्थ्य स्वास्थ्य को एक एर्रे प्रदान गर्दछ। यसका फाइदाहरूमा कम स्तन क्यान्सर जोखिम, सुधार पाचन, पीडाविहीन दुग्धपान, राम्रो मानसिक स्वास्थ्य, डिमेंशिया लक्षण राहत र सुधारिएको प्रतिरक्षा समावेश छ।
लेसिथिन र वजन घटाउनु
लेसिथिनले मानव शरीरमा प्राकृतिक फ्याट-बर्नर र इमल्सिफायरको रूपमा काम गर्दछ। लेसिथिनमा रहेको कोलीन सामग्रीले शरीरमा संकलित फ्याटलाई विघटन गर्दछ, कलेजोको फ्याट मेटाबोलिजम दक्षता बढाउँदै। त्यस्तै रूपमा, शरीरले फ्याट र क्यालोरीको अधिक मात्रामा जलाउन सक्षम छ, त्यसैले वजन घटाउने।
थप रूपमा, अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि जसले लेसिथिन लिन्छन् उनीहरूले राम्रो शारीरिक प्रदर्शन र धैर्यताको अनुभव गर्छन् जसले नगर्नेहरूको तुलनामा। तसर्थ, लेसिथिन पूरकको साथ, एक व्यक्ति अधिक जोसका साथ काम गर्न सक्षम गर्दछ र विस्तारित अवधिको लागि, अधिक तौल घटाउन प्रेरित गर्दछ।
कहाँतिर सोया लेसिथिन किन्नुहोस्
सोया लेसिथिन कहाँ किन्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ अनलाइन खोजी गर्नुहुन्छ भने, तपाईले त्यहाँ धेरै स्रोतहरू भेट्टाउनुहुनेछ जहाँबाट तपाई सोया लेसिथिन थोक खरीद गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई सोया लेसिथिन बिक्रीको लागि चाहानुहुन्छ। जे होस्, तपाईंले विक्रेताको निष्ठा स्थापित गर्न उचित व्यायाम गर्नुपर्नेछ कि तपाईं किन्नु भएको सोया लेसिथिन थोक साँच्चिकै वास्तविक छ। यदि तपाई स्क्यामर वा नक्कली विक्रेताको हातमा पर्न चाहनुहुन्न भने बिक्रीको लागि सोया लेसिथिन भएको दावी गर्ने कसैलाई विश्वास नगर्नुहोस्। प्रमाणित र इजाजतपत्र विक्रेता को लागी जानुहोस्।
सोया लेसिथिनको प्रयोग धेरै हो र यसका फाइदाहरू सोया लेसिथिन प्रयोगसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिम र साइड इफेक्टभन्दा बढी छन्। जे होस्, सोया लेसिथिन प्रयोगकर्ताहरूले पूरकको खुराक सिफारिसको पालना गर्नु पर्छ यसको उत्तम फाइदा लिनको लागि। यस बाहेक, जब उनीहरू सोया लेसिथिन आफ्नै उपभोग वा व्यापारको लागि खरीद गर्न चाहन्छन्, कसैले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तिनीहरूले यसलाई एक विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त गरे।
चुंग, सी।, शेर, ए, रुसेट, पी।, डेकर, ईए, र म्याक्लेमेन्ट्स, डीजे (२०१ 2017)। प्राकृतिक इमुल्सिफायरहरूको प्रयोग गरी खानाको इमुल्सनहरूको सूत्रण: तरल कफी व्हाइटनरहरू बनाउन कपिलजा सपोनिन र सोया लेसिथिनको प्रयोग। फूड इन्जीनियरिंगको जर्नल, 209, 1-11।
हिरोज, ए, तेराउची, एम।, ओसाका, वाई, अकियोशी, एम।, कटो, के।, र मियासाका, एन। (२०१ 2018)। मध्यम आयु वर्गका महिलाहरूमा थकान र रजोनिवृत्तिका लक्षणहरूमा सोया लेसिथिनको प्रभाव: एक अनियमित, डबल-अन्धा, प्लेसबो-नियन्त्रित अध्ययन। पोषण पत्रिका, 17(1), 4।
ओके, एम।, याकूब, जेके, र पलियाथ, जी। (२०१०) फल रस / सॉस गुणस्तर बढाउन सोया लेसिथिनको प्रभाव। खाद्य अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय, 43(1), 232-240।
योकोटा, डी, मोरेस, एम, र पिन्हो, SCD (२०१२) गैर शुद्धीकृत सोया लेसिथिनको साथ उत्पादित लाइफोलाइज्ड लिपोसोमको चरित्रिकरण: केसिन हाइड्रोलाइजेट माइक्रोएनेकैप्सुलेसनको केस स्टडी। केमिकल ईन्जिनियरि of को ब्राजिल जर्नल, 29(2), 325-335।
Züge, LCB, Haminiuk, CWI, Maciel, GM, Silveira, JLM, & de Paula Scheer, A. (२०१)) भयावह उल्टो र सोया लेसिथिन र Tween 2013 मा आधारित खाद्य emulsion मा rheological व्यवहार। फूड इन्जीनियरिंगको जर्नल, 116(1), 72-77।